नेकपा पोलिटब्युरो सदस्यको नाम तयार: को अटाए, को अटाएनन ? « Today Khabar
नेकपा पोलिटब्युरो सदस्यको नाम तयार: को अटाए, को अटाएनन ?
प्रकाशित २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १३:०२
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का आठ जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व बाँडफाँड टुंगो लागेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।